Pakhribas Updates: बाल शिक्षा
यो हाम्रो नेपाल, जहाँ आजसम्म पनि यहाँको बाल बालिकाहरुलाइ सही ढंगले वा भन्नु पर्दा सही दिशा निर्देश नभएर होला उनीहरुको शिक्षामाथि बिशेष ध्यान दिएको छैन। आज पनि हाम्रो समाजमा अझै पनि बाल बालिका माथि बाल शोषण भैरहेको छ । उनीहरुको इच्छाहरुलाइ एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने जस्तो भैरहेको छ । भन्नु पर्दा चै हाम्रो भविष्यको कर्णधार भन्छौ तर भने जस्तो कल्ले पो गरेको छ र हाम्रो यो देश नेपाल मा हैन र ?
एक पल्ट सोच्नुहोस एउटा सानोबच्चालाइ हामी घाँस काट्न ,गोठालो पठाउन, खेताला जान , दाउरा बोक्न इत्यादी विभिन्न खालको शारीरिक काम गर्न लगाउँछौ अनि फेरी स्कुलमा गलेर गएर दिमागी परिश्रम! कति गार्हो हुन्छ होला हैन त? तर हामीले कहिले पनि सोच्दैनौ ।यति मात्र कहाँ हो र अझै थकित हालमा घर फर्कन साथ पुन: त्यै बिहानको काम सुरु ....... ! के हामीमा माया भन्ने कुरा नै छैन कि समय अनुसार नै यो माया भन्ने तत्व पनि हराउदै गयो कि ? घरमा हुदा शारीरिक र स्कुलमा हुदा मानसिक तनाव कति गार्हो हुन्छ होला ति बाल बालिकाहरुलाई सोच्नु होस् त? अनि हाम्रा बाल बालिकाहरु कसरी डाक्टर , इन्जिनियर बन्छन त हैन आफ्नो घर को कामले नै फुर्सद हुदैन कहाँ बाट किताब को ज्ञान लिनु सकोस त हैन त ?
तर के गर्ने खान त पर्यो नि ,काम पनि गर्ने पर्यो नि हैन र? कति घर परिवार त यस्तो पनि छन्, राम्रो संग बिहान बेलुकी को खाना पनि खान पाउदैनन । अनि ति नानीहरुले आफनो आमा बाबुलाइ सहयोग गरेनन भने बिचरा ति नानीहरुले पनि के खाने के लगाउने हैन त ? तर दोष कसलाई दिने ? जवाफ कसले दिने ? समस्याको समाधान कसले गर्ने ? मैले कसलाई इंकित गरि रहेको छु भन्ने तपाईहरुले सायद बुझनु भैसक्यो होला, तपाईहरु पनि त बाठो नै हुनुन्छ नि कि कसो । म कुरो गर्दै छु त्यै हामीबाट चुनिएका बाठा 601 बादरहरुको , जो आज आफु ले आफुलाइ मान्छे नै हो भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्दैछन ।
यस्तो दिन पनि आउछ जुन दिन हाम्रो शाखा सन्तानहरुले पढ्ने बेला शिर्फ पढाई मात्र गर्न पर्ने छ । तर त्यसकोलागी आजै देखि हामीहरुले सोच्न पर्ने हुन्छ , के ती बादरहरुलाइ नचाउने मदारी त हामी नै हो नि हैन र ? त्यो सर्कसको बादरहरुले सायद नाच्न सिकाउने बेला भयो होला हैन र ? ल है सोच्ने पर्छ है किनकि हाम्रो कर्णधारहरुको भविष्यको भविष्य बारेमा यो चर्चा गरिंदैछ ।
Labels: Thought, मनोवाद
गहन विषयमा सचित्र एउटा उत्कृष्ट लेख माने मैले यसलाई राजिवजी..हजुरको प्रयासको सहृदय सराहना गर्दछु ।
Avishek Chongwang said...
Thanks Milan and Steve for stopping by.